"Fantatro (hoy ny apostoly Paoly) fa … ankehitriny koa no hankalazana an’i Kristy ao amin’ny tenako, na amin’ny fiainana, na amin’ny fahafatesana. Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony." Filipiana 1:19-21
Tsy niaina tany an-dapa tsy akory ny olona nanao io fanambarana io, tsy ampoky ny fahafinaretan’izao fiainana izao, na ny fitiavan’ny ankohonany. Tsia, fa nigadra tany Roma ny apostoly Paoly, noho ny finoany an’i Kristy. Inona àry no tsiambaratelon’ny fahasambarany sy ny hery anaty nananany?
Tsy hoe antokom-pivavahana narahiny, na fitsipi-pitondrantena nohajainy; fa olona iray izay tiany. Izany no loharanon-kery anaty nahatantesany ireo fijaliany. Tsy nampaninona azy na dia hoe tsy fahombiazana aza no fijerin’ny olona ny fiainany. Tao amin’i Jesosy no nahitany ny valin’izay rehetra nilain’ny fony.
Tsy natokana ho an’olom-bitsy ny fiainana izany. Azon’ny mpino rehetra atao. Raha miaraka amin’i Kristy isika, dia afaka mamakivaky ny toe-javatra rehetra mora na sarotra eo amin’ny fiainana, mikatsaka izay hahafaly Ilay Andriamanitra nampahafantarin’i Jesosy Kristy antsika. Mitaona antsika ny apostoly Paoly hanana fiainana izay Kristy no loharanony, heriny, ohatra alainy tahaka ary tanjony, eo amin’ny fifandraisantsika andavanandro any an-tsekoly, miaraka amin’ny namana na mpiara-miasa. Angamba koa rehefa anaty tebiteby, fakam-panahy, olana ara-pianakaviana, aretina, na rehefa miatrika fahafatesana…
Ety an-tany no iainana toy izany io fahasambarana miaraka amin’i Jesosy io. Any an-danitra, efa mifarana ny fiainana amin’ny finoana. Na mora na sarotra ny zava-mitranga, dia tokony hanararaotra isika hampamirapiratra ny halehiben’i Kristy ara-toe-panahy, maneho sasantsasany amin’ny toetrany, araka izay tratrantsika.